५.२८ अंक बढेर २६३३.६६ विन्दुमा नेप्से, नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीको सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री | आर्थिक अभियान
५.२८ अंक बढेर २६३३.६६ विन्दुमा नेप्से, नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीको सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री
मंसिर १५, काठमाडौं । साताको चौथो कारोबार दिन बुधवार नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ५ दशमलव २८ अंकले बढेको छ ।
नेप्से परिसूचक २ हजार ६३३ दशमलव ६६ विन्दुमा पुगेको हो । यो दिन कारोबारमा आएका २२३ ओटा धितोपत्रको ५३ लाख १० हजार २१५ कित्ता शेयर ३७ हजार ५८५ पटकमा रू. २ अर्ब ७४ करोड २० लाख बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
यो दिन कारोबारमा आएका ती धितोपत्र मध्ये दुई ओटा धितोपत्रको मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सामलिङ्ग पावर कम्पनी र न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा योदिन ९ दशमलव ९९ प्रतिशतका दरले वृद्धि भएसँगै सकारात्मक सर्किट लागेको हो ।
सामलिङ्ग पावरको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ४६१ दशमलव ४० र न्यादी हाइड्रोपावरको रू. ३७५ दशमलव ६० पुगेको छ । त्यसैगरी बुधवार सबैभन्दा बढी शेयरमूल्यमा घट्नेमा आइसीएफसी फाइनान्स रहेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा यो दिन ५ दशमलव ६२ प्रतिशत घटेर रू. ८४० मा झरेको हो ।
त्यसैगरी दोस्रोमा युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयरमूल्य ३ दशमलव ४० प्रतिशत घटेर रू. ६७६ दशमलव २० मा झरेको छ । त्यसैगरी सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीको भएको छ । उक्त कम्पनीको रू. १४ करोड ५३ लाख बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
दोस्रोमा हिमालयन डिष्टीलरीको रू.१० करोड ५१ लाख ३३ हजार बराबरको खरीदविक्री भएको छ । कारोबारमा आएका १३ ओटा समूहमध्ये चार ओटा समूहको परिसूचक घटेको छ भने बाँकी समूहको परिसूचक बढेसँगै नेप्से परिसूचक बढेको हो ।
होटल एण्ड टुरिजम समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ५५ प्रतिशत,निर्जीवन बीमा समूहको शून्य दशमलव १९ प्रतिशत,लघुवित्त समूहको शून्य दशमलव १२ प्रतिशत र जीबन बीमा समूहको परिसूचक शून्य दशमलव शून्य ३ प्रतिशतले घटेको छ ।
त्यसैगरी बैंकिङ समूहको परिसूचक शून्य दशमलव शून्य ९ प्रतिशत, व्यापार समूहको शून्य दशमलव ४३ प्रतिशत,विकास बैंक समूहको शून्य दशमलव १६ प्रतिशत,हाइड्रोपावर समूहको शून्य दशमलव २३ प्रतिशत,वित्त समूहको शून्य दशमलव २८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
त्यसैगरी उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको शून्य दशमलव ८९ प्रतिशत,अन्य समूहको शून्य दशमलव ९५ प्रतिशत, म्युचुअल फण्ड समूहको शून्य दशमलव शून्य ३ प्रतिशत र लगानी समूहको परिसूचक शून्य दशमलव १९ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । लगातार केही दिनदेखि घटेको बजार बुधवार विस्तारै सम्हालिने प्रयासमा रहेको छ ।
यो दिन परिसूचक बढेपनि कारोबारमा रकम भने बढ्न सकेको छैन । बजारमा पेनिक सेल बिस्तारै कम हुँदै गएको छ । सोही कारण पनि कारोबार रकम घटेको देखिन्छ । बजार घटिरहँदा लगानीकर्ता जति मोल पायो त्यतिमा विक्री गर्ने गर्दछन् । बुधवारको बजारमा भने त्यस्तो देखिएन, क्रेताहरु सकेसम्म सस्तो मूल्यमा किन्न चाहिरहेका थिए भने विक्री मूल्य बढाएर बेच्न खोजिरहेका थिए । यसले गर्दा पनि खरीदविक्री रकम कम भएको हो ।
बुद्धभुमि नेपाल हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य ८.१८ % ले वृद्धि, खरीद माग उच्च [२०७८ माघ, ५]